Valve namboarina, kojakoja valves, singa mpantsaka - DEYE
Indostria solika sy simika
Tetikasa an-dranomasina sy an-dranomasina
Rano fisotro sy fantson-drano
Ho hitanao ny vahaolana mety aminao
DEYE piping Industry dia orinasa vondrona mifangaro amin'ny R & D, famokarana sy marketing amin'ny valve indostrialy, mifantoka amin'ny fikarohana vahaolana ho an'ny filan'ny indostrialy Piping izahay ary manome serivisy ho an'ny matihanina ho an'ny valves ankapobeny sy valizy sy valizy natokana ho an'ny valves, kojakoja fantsona misy flanges mifanohitra, gasket, bolts ary voanjo.
Ny indostrian'ny fantsom-panafody Deye dia mametraka atrikasa roa ho an'ny famokarana valves. Ny valizy DEYE (Wenzhou) dia mifantoka amin'ny valves API ho an'ny solika sy entona, Petrochemical ary ranomasina. DEYE Valve (Hebei) Mifantoha amin'ny valves momba ny fitsaboana rano sy ny fampiasana fantson-drano. Valve ho an'ny rano fisotro dia miaraka amin'ny taratasy fanamarinana neken'ny WRAS.
Valve farany miditra ambony
Valizy baolina nalevina feno
Valizy indroa sy valizy mandeha rà
Valve ho an'ny indostrian'ny PETROLEUM sy ny chimical
Ny valizy natao ho an'ny API dia misy valves vavahady, valve check, valves manerantany, valves ball, valves plug, no tena ampiasain'ny tetikasa Petrole sy indostrian'ny simika.
VALVE HO AN'NY PROJECT SEAWATER SY INDRINDRA TANINDRAZANA
Ny valizy matanjaka manohitra harafesina dia misy valves vavahady, valve valves, valves manerantany, valve ball, valves an'ny lolo sns.
VALVE HANOMPOAN'NY RANO fisotroana sy fikororohana
Valve vavahady tsy misy poizina, valve check, valves lolo, valve air ect, no tena ampiasaina amin'ny fisotroana Tetikasa Rano azo entina miaraka amin'ny fitaovana eken'ny WRAS.
Manolotra valizy lolo eccentric indroa amin'ny DN150-2500 natao miaraka amin'ny faharetana mifantoka. Ny kapila mitongilana sy voaro mafy, ny famolavolana tombo-kase nohavaozina ary ny faritry ny zoro arovan'ny harafesina dia endri-javatra rehetra mahafeno ny fenitry ny API609, BS5155 Low head loss / Mety amin'ny famonoana servic ...
Tetikasa paompy-JUL. 16, 2020
Valan-tsolika vy metaly misy seza Bronze DN1500 miaraka amin'ny valizy mandalo Ny asan'ny valizy bypass amin'ny valizy vavahady napetraka amin'ny paompy be dia be dia be ny rano sy manampy rano: 1. Rehefa manomboka mandeha ny paompy rano lehibe iray, raha misy rivotra amin'ny w ...
Fitsapana hafanana ambany ho an'ny lohasaha cryogentic
Fitsapana fampiasana fiainana ho an'ny sanda vavahady misy seza EPM
Ho an'ny fangatahana momba ny vokatra na ny tetik'asa ary ny tender, azafady mba apetraho aminay ny mailakao ary hifandray ao anatin'ny 24 ora izahay.